Isihloko ekutshela ngalokho cutlasses, abakwenzayo, ukuthi ngaso linye kwabo kwezinye izinhlobo izinkemba, futhi obani abazijwayele.
Namuhla, izakhamuzi emazweni angaphezu noma ngaphansi athuthukile eside abasijwayele yokuthi ibanga kalula unqobe uma ngiphoqelekile ngempela. Noma yimaphi kula kungaba ngokushesha ngisho kahle ukuwela zifike ngezindiza, izitimela noma umkhumbi. Kodwana abokhokho bethu abazange babe ubuchwepheshe obufana, futhi isikhathi eside kuphela indlela yokuxhumana phakathi kwamazwe ngamazwe noma nge esogwini wahlala kuphela imikhumbi.
Sebenzisa kubo abantu baqala ezikhathini zasendulo. Ngokuhamba kwesikhathi, design yabo iye obathuthuka, okuyinto kunomphumela ezuzisayo phezu ijubane, nokwethenjelwa umthamo. Lapho shipbuilding yathuthuka elifanele, olwandle ngokuvamile baqala kukhuphukele emakhaleni ami impi, futhi isikhathi eside isiphepho kwezilwandle izilwandle babe pirates. Lokhu kwaqhubeka kwaze kwaba baze usethe amayunithi ekhethekile esiphikisayo bese mabutho oluhle ngemikhumbi yempi, lapho babehilelekile ukuvikelwa ezinkantolo ezivamile angibuza noma ekhethekile ukudoba pirates. Futhi cishe isikhali ozithandayo kakhulu izigebengu babe cutlasses. Ngakho kuyini, buhle buni bakuphi futhi kanjani isicelo? Kulesi siyowuqonda.
Ukuze uqale, ake ukubhekana amagama. Saber - nhlangothi zombili isikhali Melee nge elide, blade lwalugobile. Futhi elidlula kulo omunye, yilokhu iyahlule inkemba. Ngokwesibonelo, katana Japanese - inkemba, hhayi inkemba, njengoba kukholelwa kanjalo ngokuvamile. Kuyefana nasendleleni ngezikhali ezifana cutlasses.
Boarding - a Kuhlanganiswe imikhumbi emibili bese kokuwalungisa isihlobo komunye nomunye izintambo noma ngezinye izindlela kanye nezisebenzi ukushayisana lwemikhumbi womabili amaqembu. Ngakho kufika mazwi adumile abonisa "ukuba bagibele", okusho ukuthi uthwebule umkhumbi alien abulale nezisebenzi. Boarding kuyaqabukela eside, ngokuvamile senzakalo oludlulayo lapho Yiqiniso cishe noma isiphi isikhali.
Isikhali eziphumelela kakhulu cutlasses ziye waqaphela ngokuhamba kwesikhathi. Isizathu salokho usekhonze ezicini eziningana. Okokuqala, ubungako bawo: kuleso siphithiphithi lwempi ephethe inkemba ende akuyona njalo elula, njengoba kakhulu, yakhelwe endaweni evulekile. Okwesibili, ukuma lwalugobile evumela ukusebenzisa lokuqobela punches ezijulile futhi eqinile. Futhi basiza isisindo omkhulu lwenkemba. Okwesithathu, isandla alwa ivaliwe izigijimi Iwumbono ekhethekile akwanele ukuthi bavikela pirate umlenze noma isosha, kodwa futhi avunyelwe ukuba ukuletha amagalelo enamandla empini kuseduze isitayela zethusi knuckles.
Kungenxa yalezi zizathu ukuthi izikhali ezinjalo wathola ngokushesha ukuqashelwa jikelele. It yayisetshenziswa njengesikhungo pirates namabutho coast unogada noma empi. Ngakho manje siyazi ukuthi Cutlass.
Yiqiniso, eyodwa kuphela sabres pirates behlomile amatilosi asendulo aluphelanga. Kodwa uma sicabangela ke pirate, okufaneleyo ngesikhathi impi ukuthunjwa esibuthakathaka yomthengisi, ngaphandle sabres boarding kanye izinkemba yayithandwa nge rapiers. Nokho, bakhetha lezo kuphela abakwaziyo sibaphathe kahle, kusukela ngo-izikhali ezinjalo ayakhelwe nquma, kodwa kuphela kwalesi sigameko, engesiyo Ukugunda ulwa njalo.
Kwaba imimese ethandwa futhi evamile futhi imimese. Kodwa Ephakathi, lapho yasungulwa nezibhamu flintlock, Pirates bayathandeka ngesibhamu. Nokho, kuphela njengoba isikhali ithuba lokugcina. Ngezinye izikhathi omunye wabo kwenzakaleni kabili, okwathi ngemva kwalokho bonke wadlulisela steel abandayo.
Kwaba imimese ezivamile futhi abavamile, eside, blade ewumngcingo elikuvumela ukuze ifohle ukuzivikela sesitha izilonda ezijule.
Futhi by the way, Russian iDemo Cutlass ngokuvamile okuthiwa saber. Ngokwengxenye lokhu kuyiqiniso, ngoba ukufana kwesakhiwo kuya yokugcina. Nokho ukudunwa endaweni yethu ukuthi welulele ngisho nakwezinye izingxenye zomhlaba.
Kancane kancane, indima ukuhlaselwa okunjalo kuyehla, futhi ekugcineni sehliselwe engelutho. Isizathu salokhu ukuthuthukiswa izibhamu - izibhamu, izibhamu izibhamu nande. Futhi kamuva eziphendulwa umoya zaqala ukusetshenziswa ekhethekile anti-umkhumbi izikhali. Futhi manje ukuba kugitshelwe umkhumbi lithwala eziningi izibhamu noma iziqhumane, kumane nje akunakwenzeka. Nokho, kwezinye izingxenye ezikude ukudunwa emhlabeni ukhona kuze kube yilolu suku, ezifana e Somalia. Nokho, pirates waseSomalia ungakaze ukuhlasela umkhumbi kahle ahlomile bese ukhetha salokhu yezitolo injongo, ngaphandle ukuvikelwa. Futhi lokhu ngisho elula, kodwa lungase lubizwe boarding.
Cutlasses zisebenza kuphela uqondise boarding lapho ijubane ezibucayi, amandla nomthelela futhi ukudla iDemo yokunyakaza. Ngesikhathi esifanayo, ezivamile somhlaba kunenzuzo ukusebenzisa eside izinkemba, rapiers, izinkemba noma sabres.
Ehla Exotic: Uphaya tangerines